विश्व Archives | Page 81 of 100 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
एक महिला पत्रकारको मुस्कानमा ट्रम्प लठ्ठिएपछि…
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बारेमा कुरा गर्दा उनले मिडियालाई त्यति धेरै मनपराँउदैनन् भन्ने गरिन्छ । तर, हालसालै उनी एक महिला पत्रकारको सुन्दर मुस्कानमा यति धेरै लठ्ठिए क... Read more
अमेरिकी अदालतले गर्‍यो नेपालीहरुका लागि निकै दुखद फैसला !
न्यूयोर्क । अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ । हालैको एउटा मुद्दामा अमेरिकाक... Read more
बोको हरामले १० जना महिला प्रहरी अपहरण गरेपछि !
अबुजा (नाइजेरिया) । नाइजेरियाको शक्तिशाली आतङ्कबादी संगठन बोको हरामले दशजना नाइजेरियाली महिला प्रहरी अपहरण गरी बन्दी बनाएको छ । उनीहरुले ती महिला प्रहरीलाई अपहरण गरी बन्दी बनाएको दाबी गरेका... Read more
मृत्युको भयानक खेल २४ घण्टासम्म देखाइयो लाइभ, आखिरमा ज्यानै गयो !
एजेन्सी । भारतमा पैसा कमाउनको लागि एक किशोरको मृत्युको भयानक खेल २४ घण्टासम्म प्रत्यक्ष देखाइएको छ । ती किशोरलाई २४ घण्टासम्म बोरामा बन्द गरेर ५ फिट गहिरो खाल्डोमा २४ घण्टासम्म राखिएको थियो... Read more
अमेरिकाबाट आयो नेपालीहरुका लागि निकै दुखद खबर !
काठमाडौँ । अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थितिमा सुधार आएको दाबी गर्दै नेपालीलाई राजनीतिक शरण दिन नसकिने फैसला गरेको छ । हालैको एक मुद्धामा अमेरिकी पुन... Read more
चीनले गर्‍यो खतरनाक मिसाइल युद्धपोतको प्रक्षेपण, भारतलाई ठूलो टेन्सन !
बेइजिङ/एजेन्सी । चीनले बुधबार आफ्नो पहिलो गाइडेड मिसाइल युद्धपोतको प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वकै ठूलो युद्धपोत ‘टाइप–५५’ लाई बुधबार सांघाईको जिआगनान सिपयार्डमा आयोजित समारोहका बीचमा प्रक्षेपण... Read more
सिरियामा हवाई आक्रमण ४० सर्वसाधारण मारिए
दमासकस, १४ असार । सिरियाको पूर्वी प्रान्त देइर अल जोउर प्रान्तमा भएको अमेरिकाआवद्ध हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ४० सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित समाचार समिति सानाले बुधबार सो जा... Read more
मौसमबारे जानकारी दिइरहेका पत्रकारलाई छातासहित हावाले यसरी उढाएपछि…[भिडियो-सहित]
एजेन्सी, आयरल्याण्डको लाइभ टेलिभिजनमा मौसमबारे छाता ओढेर जानकारी दिइरहेका ब्रोडकास्टर स्पिकर डेरिक हार्टिगनलाई हावाले उढाएपछि उनि हासोको पात्र बनेका छन् । डेरिकले मौसम सम्बन्धि जानकारी दिदै... Read more
ह्वाइट हाउसमा ‘मोदीकी श्रीमती’ को लागि सुरक्षाकर्मीले कारको गेट खोलेपछि हंगामा ?
सोमबार नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपलाई भेट्न पुगेका थिए । ट्रम्प र उनकी श्रीमती मेलानिया मोदीलाई ह्वाइट हाउस बाहिर स्वागत गर्न बसेको देख्न सकिन्छ । तर यतिबे... Read more
एउटा गल्तीले ८४ वर्ष पुरानो कम्पनी बन्द, ९२ हजार करोड डुब्यो
जापानको ८४ वर्ष पुरानो अटो सप्लायर कम्पनी टकाटा बन्द हुने संघारमा पुगेको छ । कारका विभिन्न सामग्री उत्पादन गरी विभिन्न कार उत्पादक कम्पनीलाई बेच्दै आएको यो कम्पनीको एयरब्यागमा खराबी आएपछि कप... Read more